5228 मोबाइल फोन मोडेल (नोकिया), यस लेखमा प्रस्तुत गरिने सुविधा फिनिस कम्पनी प्रविष्ट जो जाति, को परिणाम हो। चुनौती एक टच स्क्रीन संग उपकरणहरू को लागत कम थियो। यी मोडेल को एक 5228 उपकरण (नोकिया), जसको विशेषता तल देखाइएको छ थियो। आज हामी यस फोन संभावित खरीदारों गर्न प्रस्ताव छ भन्ने तथ्यलाई कुरा।
Nokia 5228: विशेषताहरु
मोबाइल फोन विकास र 2009 मा जारी भएको थियो। यो जीएसएम बैंड मा काम समर्थन गर्दछ। काम मंच - S60 पाँचौं पुस्ता। सिम्बियन 9.4 अपरेटिङ सिस्टम खैर, जो समावेश थुप्रै उपकरणहरू र नोकिया 5228. सिम्बियन यो संस्करण विशेषता प्रयोग, कम्पनी को आधिकारिक वेबसाइट मा पोस्ट गरिएको छ। यन्त्र प्रोसेसर एआरएम यो घडी आवृत्ति मा संचालित 11 बारे 435 मेगाहर्ट्ज छ। यसको आकार 111 (लम्बाइमा) 51.7 (विस्तृत) र 14.5 (मोटाई मा) संग मिलिमिटरमा एकाइ 113 ग्राम वजन। सामान्य मा, यो एक राम्रो सूचक हो।
शरीर र ब्याट्री
हामी कहिलेकाहीं तिनीहरूलाई बीच एक सीधा लिंक छ किनभने यी दुई फरक विशेषताहरु, एक मा संयोजन गर्ने निर्णय गरे। Nokia 5228, अब हामी क्लासिक फारम कारक मा, प्रतिनिधित्व जो को विशेषताहरु, एक monoblock प्रतिनिधित्व छ। आवास को लागि प्रयोग प्लास्टिक। सोही, रंग योजनाहरु सन्दर्भमा, उनि एकदम विविध छन्। त्यहाँ संयुक्त रंग हो। फोन एक लिथियम-आयन प्रकार ब्याट्री, 1320 milliamperes घण्टा मा गणना समावेश छ। विकासकर्ता अनुसार, यन्त्र तम्तयार समय को 440 घण्टा समर्थन सक्षम छ, कुरा समय - मात्र सात।
Nokia मोडेल 5228 (वाइफाइ सुविधा पनि प्रदान गरिनेछ) स्क्रिन विकर्ण 3.2 इन्च संग सुसज्जित छ। रंग प्रजनन - 16 लाख रंग को स्तर मा। सूचकांक मानक, केही विशेष। यो उपकरण एक म्याट्रिक्स प्रकार TFT प्रयोग गर्दछ। यसलाई मा गुणस्तर, पाठ्यक्रम, को आईपीएस वा सुपर AMOLED मा रुचि छैन। तर, यो उपकरण जस्तै तत्व इकट्ठा गर्न पनि स्मार्टफोन, छ। त्यसैले, हामी सबै को अनुज्ञेय भित्र छ कि मान। यस्तो विकर्ण स्क्रिनको संकल्प 360 x 640 पिक्सेल छ।
मल्टिमिडिया क्षमताहरु को एक सेट
त्यहाँ केही विशेष एकाइ छ 5228 (नोकिया)। यस सन्दर्भमा उहाँको विशेषता तपाईं निम्न बताउन सक्छ। को घन्टी टोन मा तपाईं एक रिङटोन वा पलीफोनिक रिङटोन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। समर्थन कम्पन प्रकार्य। कार्यात्मक प्याकेज आवाज डायल, साथै व्यवस्थापन पनि समावेश छ। को स्पीकरफोन केही लागि र भन्न रूपमा, अब यो कुरा लगभग हरेक फोन छ। अन्य तत्व बीच, यो उल्लेख गर्न सकिन्छ मिडिया प्लेयर संगीत फाइलहरू, आवाज रिकर्डर र एक एनालग रेडियो। यो यसको प्रयोगमा एन्टिनाको रूपमा बाह्य तार हेडसेट जडान गर्न आवश्यक हुनेछ भन्ने हो।
स्मृति र सम्पर्क
फोन भित्र र उपकरण 5228 (नोकिया) द्वारा समर्थित सिम कार्डमा फोन सम्पर्क बचत गर्न सक्ने क्षमता। स्मृति सुविधा कम गुलाबी छ। यसको गैर-अस्थिर मात्रा 70 मेगाबाइट छ। र हामी 128 एमबी, स्मृति कुरा त। विभिन्न मात्रा मा स्मृति कार्ड सेट समर्थन गर्दछ। अधिकतम एक - 16 गिगाबाइट।
संचार र इन्टरफेस
ई-मेल प्रयोग गर्नेहरूलाई, कृपया निर्मित ग्राहक। डाटा स्थानान्तरण सामाग्री 2.0 मानक प्रयोगको माध्यमबाट बाहिर छ। ठीक त्यही संस्करण निर्मित ब्लुटुथ मोड्युल छ। वाइफाइ विशेषता बताएको यसलाई बस गर्दैन केवल एक सरल बिन्दु, comprises। जबकि यो अचम्मको छैन। नरम खोल पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क जडान गर्न ब्राउजर छ। GPRS र किनारा छैनन्। को इन्टरफेस को स्टेरियो ढाँचा 3.5 मिलिमिटरमा लागि उत्पादन र मानक MicroUSB कनेक्टर हुन सक्छ।
फोन मात्र एक क्यामेरा छ। मोड्युल यो एक दुई-मेगापिक्सेल क्यामेरा छ। यो चित्र संकल्प द्वारा 1200 पिक्सेल 1600 छ। यसलाई तीन-गुना वृद्धि गर्न, डिजिटल जूम गर्न सम्भव छ। तपाईं MP4 र 3GP ढाँचामा भिडियो शूट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रति सेकेन्ड फ्रेम को संख्या - वरिपरि 30 टुक्रा मा। भिडियो संकल्प यसरी 640 X 480 पिक्सेल छ।
Nokia 5228: विशेषताहरु, प्रयोगकर्ता समीक्षा
गुणस्तर, फिनिश निर्माता को उत्पादन को कमी ध्वनि सम्बन्धी समस्या। यो यस मोडेल खरिद भएकाहरूलाई ध्यान। राम्रो घन्टी मात्रा, राम्रो कम्पन चेतावनी - के राम्रो तरिकामा उपकरण सेट भन्ने। को downsides अधिकतम मात्रा मा वक्ता फुफकार छुट्याउन सक्नुहुन्छ।
सबै भन्दा नजदीकी स्थान घरेलू प्रतियोगी नोकिया 5230. सामान्य छ, तिनीहरूले यी मोडेल, वास्तव मा, केवल जीपीएस द्वारा फरक। त्यहाँ कन्फिगरेसन केही मतभेद हो: यो एक मेमोरी कार्ड छ। सोही, एकाइ अब आधिकारिक पसलहरुमा बेचिएको छ, तर दोस्रो बजार मा यसको मूल्य36000 देखि खसे।
कसरी 5228 सिर्जना गर्ने एक सानो बिट
माथि उल्लेख गरिएझैं नोकिया 5228 सुसज्जित टच स्क्रीन संग फोन को लागत कम गर्न डिजाइन गरिएको छ। उपकरण को खण्ड मा सस्ता र सबै भन्दा किफायती साबित भयो। जबकि त्यो बाह्य उपकरण संग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतियोगिहरु हार्ड पर्याप्त छ। कि फिनिस निर्माता नयाँ प्रचार स्टन्ट आविष्कार गर्न, बाहिर प्राप्त थियो।
यस सन्दर्भमा, 5228 प्रतिहरू सम्पूर्ण 5230. राम्रो प्लास्टिक, को गठन गुणस्तर एक उच्च तहमा छ। त्यहाँ प्रयोगमा सानो creaking छ, तर यो मान्य छैन। आन्तरिक संलग्न परिवर्तन भएको थियो। शरीर एक अखंड सिस्टम छ। कुनामा प्रस्थान छैन, सबै मजबूती मिलाएका छौं।
सही-हात पक्ष किनारा घुमाव कुञ्जी, भोल्युम परिवर्तन गर्न निमित्त जो accommodates। भनेर तत्काल आफ्नो फोन लक गर्न अनुमति दिन्छ एक स्लाइडर पनि छ र। त्यहाँ एक क्यामेरा बटन छ। खैर, स्लाइडर distortions बिना राम्ररी कार्य गरिएको छ।
कसरी टन मा इन्टरनेट असक्षम? गरेको सम्झौता गरौं
महसुल "गुलाबी" ( "Tele2"), कसरी जडान गर्न?
जो क्षेत्रहरु र जो अपरेटर 920 औं डायल कोड गर्दछ?
"मेगाफन" गर्न "मेगाफन" संग रूपमा पैसा फेंक: सबै तरिका
कसरी फिर्ता "बीलाईन" एक कल लागि सोध्नु। कसरी अन्य संचालक गर्न "एक माग्नेले" फेंक?
अपरेटर र तेस्रो-पक्ष कम्पनीहरु: को "बीलाईन" मा सामाग्री कसरी असक्षम
टोयोटा को केमरी कार। समीक्षा
"Borodino क्षेत्र" (संग्रहालय-आरक्षित): आकर्षण, वर्णन
एक बिरालो को ऊन फल्स: सम्भावित कारणहरू
Postpartum corset छ आंकडा फिर्ता गर्न सक्षम छन्?
लाभ ogurdyni। खेती र हेरविचार
आफ्नै छत कसरी पुल?
आफ्नै हातले पोशाक Pinocchio
प्रभावकारी चिकित्सा 'Inderal'। प्रयोग, contraindications
ActiveX - यो के हो? एक ActiveX नियंत्रण कसरी स्थापना गर्ने?
होटल "Radisson शाही होटल", मास्को: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा